12 WhatsApp Matipi & Matipi (2020) - Unofanira Kuziva - Zvemagariro
21 WhatsApp Matipi & Matipi 2020 - Unofanira Kuziva
Isu tinorarama mune rakapotsa nyika umo kutaura pane chats, kugovana dhata kunoitwa zvakanyanya pane edu azvino mafoni mafoni. WhatsApp ndeimwe yeanonyanya kufarirwa uye anoshandiswa zvakanyanya kunyorera. Kuve nekukurumidza uye nekukurumidza kutumira mameseji kunyorera, WhatsApp inoshandiswa kune akawanda zvinangwa. WhatsApp ndiyo brainchild yemapiyona maviri eYahoo. Mugore ra2014, izvi Anoshamisa Anwendung akatorwa pamusoro Facebook .
Chero ani ane yakakodzera internet yekubatanidza anogona nyore kugovana mavhidhiyo, odhiyo, uye mifananidzo mukati memasekondi. Kutaurirana nehama kana shamwari dzinogara kure kwavewo kugadzikana nenzvimbo yeapp yekufonera nzvimbo.Vazhinji vashandisi vanotaura WhatsApp seye mushandisi-inoshamwaridza kunyorera sezvo iri yemahara kushambadzira inopinda pakati pekutaura kwako. Kubva kuvhurwa kwayo, iyo app yakakwidziridzwa uye yakagadziridzwa kakawanda. Semuenzaniso, kusvika gore ra2009, hapana kana imwe meseji iri muapp yakachengetedzwa.
Nekuda kweizvozvo, hurukuro uye dhata dzinogona kubiwa nemunhu chero nyore. Asi muna 2012, WhatsApp yakagadziridzwa, uye chinhu chitsva chakabatanidzwa, icho chaigona kunyora zvese hurukuro dzichivachengeta vari vega. Mumakore mashoma apfuura, WhatsApp yanga ichitamba chinhanho mukufambisa kutaurirana kwebhizinesi. Ruzivo uye zviziviso zvakakosha zvino zvinogona kusvikwa kune vanhu vazhinji vari muchikwata chat kungodzvanya bhatani. Uyezve, tichichengeta mupfungwa kuchengetedzeka uye kuchengetedzwa kwevashandisi vayo, iyo yehupenyu yekutevera chinhu inobvumira kugovana nzvimbo chaiyo yemunhu neshamwari uye nemhuri.
Zvimwe zveWhatsApp Guides:
WhatsApp Boka - Gadzira, Govera & Tumira
WhatsApp vs Signal - Ndeipi Yakachengeteka?
Chakavanzika WhatsApp Matipi & Tricks: Unofanira Kuziva
Zvakanaka, vazhinji venyu mungangodaro musingazive nezve mashoma manyorerwo ayo WhatsApp anopa. Mumakore ese aya, zvese zvatinoziva ndezvakakosha zveWhatsApp iri boka rekutaura, vhidhiyo kufona, kugovana midhiya mafaira, uye mamwe magwaro uye kufona kwenzwi. Nekudaro, kune zvimwe zvakawanda zvinonakidza zvinhu izvo WhatsApp inofanira kupa kune vashandisi vayo. Ngatikurukurei mamwe emazano eWhatsApp.
1. Unogona Kuverenga nekutumira Meseji Pasina Kubata Screen
Unofanirwa kunge uchifunga nezve kutumira kana kuverenga meseji usina kana kunyora pafoni kana kuvhura chat. Zvakanaka, tekinoroji yakaita kuti zvinhu zvakawanda zviite uye zvive nyore kwauri. Unogona kutaura kune chero Siri kana Google Mubatsiri vanova nharembozha vabatsiri pachinangwa ichi. Nechirevo chimwe chete chemashoko, mameseji ako anoverengwa kana kutumirwa pasina nguva. Inozivikanwa, handizvo here? Saka sei usingazviedze iwe pachako?
2. Nhaurwa dzinogona kutemerwa seisina Kuverengwa Kunyangwe Mushure mekunge Wadziverenga
Izvi zvakamboitika kwauri kare here, kuti iwe wakavhura chat asi wakakanganwa kupindura, kana kuti wakamboivhura zvisirizvo pawanga usingade? Pasina kunetsekana nezve zviitiko zvakadai sekuti chats dzinogona kumakwa zviri nyore sekusaverengwa. Vashandisi veApple vanongofanirwa kutora iyo hurukuro yaunoda kumaka seisina kuverengwa iwe unowana sarudzo yekusaverenga tinya pane izvo, uye chat yacho inogona kutemerwa isina kuverengwa.
Muchiitiko chevanhu vane iOS, swipe kurudyi chat, uye iyo 'Unread' sarudzo inowanikwa pachiratidziri; tinya pairi, uye iyo chaiyo chat ichaiswa mucherechedzo isina kuverengwa. Ino nzvimbo inokuyeuchidza iwe yekupindura kune hurukuro kana iwe ukakanganwa kupindura kune imwe.
3.Kurumidza Broadcast Yakavanzika Meseji ine Akawanda Akawandisa Pasina Kugadzira Boka
Panogona kunge paine mameseji mazhinji aunofunga kuti anofanira kutepfenyurwa zvakasiyana pasina kugadzira rimwe boka rawo. Zviri nyore kutepfenyura iwo mameseji.
Kana iwe uine Android mudziyo, pane matatu akamira madonhwe pakona yepamusoro yekurudyi, tinya pairi, uye iwe unowana mukana we 'nhepfenyuro mameseji.'
Kune rimwe divi, kana iwe uine iOS, sarudza menyu icon pane yepamusoro kuruboshwe kona uye tinya pane sarudzo ye 'nhepfenyuro mameseji.'
Chinja ku Mafonti Matsva
Iwe unoona iyo imwechete isinganetsi font pese paunovhura yako WhatsApp, handizvo here? Iye zvino, unogona kushandura mafonti eWhatsApp uye edza mafonti matsva anoshamisa. Unogona kushinga iwo akakosha mameseji kana kuchinjisa iwo italics. Kana iwe uchida kuita iyo font kushinga, isa asterisk pakutanga nekuguma kwemutsara. Kana iwe uchida kuishandura kuita iticiki, isa pasi pazasi pekutanga nekuguma kwemutsara.
4. Kugovana Nzvimbo Yako Yepamoyo neShamwari neMhuri
Kwakave nemazuva apo iwe waifanira kuvhura yako Google mepu neshamwari dzako uye nemhuri kuti utarise nzvimbo yako. WhatsApp ine ino yakasarudzika ficha yenzvimbo mhenyu iyo inogona kugovaniswa neshamwari dzako uye mhuri. Iyo nzvimbo inoramba ichigadzirisa chero kwaunoenda.
5. Viga Yako ‘’ Yokupedzisira Kuonekwa ”Nyore paWhatsApp
Wakambobatwa here uchingozeya munhu nekuda kwekuti 'Wakaonekwa' paWhatsApp? Zvakanaka, ikozvino unogona kuvanza nyore yako yekupedzisira yawakaona kubva kune vako vokukurukura. Nenzira iyi, ivo havazomboziva yako yepamhepo pamwe nepamhepo chinzvimbo.
6. Bvisa Blue Tiki
Chitupa chebhuruu paWhatsApp chinoratidza kuti mugashiri averenga meseji. Nekudaro, pane dzimwe nguva dzausingade kuti mumwe munhu azive kuti iwe waverenga meseji; pakadaro, unogona kuviga chitupa chebhuruu.
7. Misa iyo otomatiki Kurodha kweMedia Mafaira
Kazhinji gallery yako inozadzwa neboka remifananidzo isingadiwe kubva kune akasiyana macontact. Iwe unogona ikozvino kukodha ma media mafaera iwe aunoda mune yako gallery uye chengeta zororo pasina kurodhaunira. Izvi zvinochengetedza yakawanda yekuchengetedza kwako uye nekukubatsira iwe kusarudza chete akakosha mifananidzo uye ma audios.
8. Taura Pasina Kuchengetedza Nhamba paWhatsApp
Pakutanga zvaive zvakafanira kusevha iyo nhamba kuitira kuti titange kutaura paWhatsApp. Zvino, iwe unogona kutanga nyore kutaura kunyange pasina kusevha iyo nhamba pane yako kifaa. Nekudaro, iwe ikozvino waponeswa kubva padambudziko rekuchengetedza yega uye yega nhamba pane yako nhare.
9. Unogona Kudzosera Iwo Akadzimwa Meseji
Zvinowanzoitika kuti mamwe mameseji anobviswa paWhatsApp yako. Pane akawanda akakosha mameseji aunoshuvira kudzoreredza aya mameseji anogona kuitwa nyore. Meseji idzi dzinogona kudzoreredzwa kuburikidza negadziriro yeparutivi sarudzo. Enda kumigadziro uye tsigira meseji.
10. Wona Akadzimwa Meseji Nyore
Iko kune nguva dzose kuda kuziva kuti meseji dzakadzimwa. Iye zvino unogona kuziva zvirimo meseji yakadzimwa zvakare. Zvese zvaunoda kuti uite kutevedzera mamwe ematanho akareruka ekuti utarise matanho ari nyore.
Iwe unotanga kuda kutora izvo Zvakabviswa kubva kuGoogle Play Store.
Kamwe Anwendung yave iiswe, zadza akakodzera mashoko, uye vawane musi 'WhatsApp' kuita.
Bvumira iyo Anwendung kusevha mafaera; kana uchinge wazviita, iyo Anwendung inozozvichengetera yega mameseji aunogamuchira paWhatsApp, kusanganisira iwo akadzimwa mameseji zvakare.
11. Shandisa maWhatsApp maAccount maviri paNhare Imwe
Panogona kunge paine nguva apo iwe paunonzwa kudiwa kwekuve neakaparadzaniswa WhatsApp account nekuda kwechinangwa chakasiyana. Ichi chishuwo chinogona kuzadzikiswa nekukodha chero eanogadzira maapplication; semuenzaniso, mu Android, unogona kurodha pasi, Parallel Space. Sarudza iyo WhatsApp wobva wawedzera kune iyo Parallel Space. Nenzira iyi, iwe unenge uine zvachose chakasiyana app uye account.
12. WhatsApp Kufona kunogona zvakare Kunyoreswa
Parizvino, iwe unongoziva chete nezve zvakajairwa mafoni ari kunyorwa. Asi kwauri kushamisika, kunyangwe iyo WhatsApp inoshevedza inogona kunyorwa. Icho chiitiko chakapusa kurekodha WhatsApp kufona zvakare. Tevera matanho ataurwa pazasi.
Dhawunirodha Cube Caller pane yako Android kifaa.
Vhura iyo Cube Caller app uye wobva wachinja wakananga kuWhatsApp.
Ipapo, iwe unogona kufonera munhu wesarudzo yako kubva kuWhatsApp.
Pangosvika iko kufona kwacho kwatanga kurekodha, icharatidza mwenje; kana ikaratidza chero mhando yekukanganisa, iwe unoshandura marongero eapp uye edza zvakare.
Kusiyana nemamwe mapurogiramu ekushamwaridzana, WhatsApp inotibatsira chete kubatana nevanhu vatinoziva kare kana vatakagovana navo manhamba edu. Izvi zvinoita kuti ive tekinoroji inodzvinyirira. Iko kukura kwekushandisa kweichi chishandiso iko zvino chave kuita kupindwa muropa nevanhu. Kune rimwe divi, zvinoshandiswa pasocial network zvakaunza shamwari dzepedyo, hama, uye vadikanwa padyo, asi panguva imwechete vakatiparadzanisa nevari padhuze. Kunyangwe paine kukanganisa kwayo, zviri kumushandisi kushandisa app zvine hungwaru pasina kuzvikuvadza zvakanyanya.
WhatsApp Dzimwe nzira
21 AirPods Pro Matipi uye Matipi
WhatsApp vs Signal - Ndeupi Akakodzera?
10 madhora psn kodhi yemahara
Microsoft izwi kukoreji mudzidzi kudzikisira
tarisa emahara emahara mafirimu mu hd
tarisa bhaisikopo online kutenderera mahara
maitiro ekugadzira robux mu roblox
vana bhaisikopo online mahara